Madaxweynayaasha Masar, Faransiiska oo ka wada hadlay arrimaha gobolka, biyo xireenka Niil ee Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweynayaasha Masar, Faransiiska oo ka wada hadlay arrimaha gobolka, biyo xireenka Niil...
Madaxweynayaasha Masar, Faransiiska oo ka wada hadlay arrimaha gobolka, biyo xireenka Niil ee Itoobiya
Madaxweynaha Masar Abdel-Fattah al-Sisi iyo dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka wada hadlay axadii biyo xireenka weyn ee Itoobiya ay ka dhiseyso wabiga Nile, horumarkii ugu dambeeyay ee Libya, iyo dadaallada la dagaalanka argagixisada.
Intii ay ku wada hadlayeen khadka taleefanka, labada madaxweyne waxay kaloo ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dhinac ee dhinacyo badan, gaar ahaan heerarka dhaqaale iyo milateri, ayuu afhayeenka madaxweynaha Masar Bassam Rady ku yiri hadal uu soo saaray.
Waxay sidoo kale ka hadleen waxqabadka shirkadaha Faransiiska ee ka shaqeeya mashaariicda horumarineed ee kala duwan ee Masar, ayuu yiri afhayeenku.
Madaxweyne Sisi wuxuu taabtay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee qadiyada Liibiya iyo mowqifka adag ee istiraatiijiga ah ee Masar ay ka taagan tahay arintan, isagoo carabka ku adkeeyay dadaalka dalkiisa ee ku aadan taageerida hey’adda cusub ee kumeel gaarka ah ee fulinta Liibiya.
Sisi wuxuu kaloo cadeeyay inay lama huraan tahay ka daadgureynta Liibiya calooshood u shaqeystayaasha iyo ka hortaga faragalinta shisheeye ee sharci darada ah ee arrimaha Liibiya.
Labada madaxweyne ayaa sidoo kale isdhaafsaday aragtiyo ku saabsan horumarka Grand Ethiopian Renaissance Grand Dam (GERD) oo laga dhisay webiga Nile, Rady ayaa sidaas yidhi.
Sisi wuxuu cadeeyay in Masar ay siineyso arintaan ahmiyada ugu weyn ee laga siinayo difaacida xuquuqda taariikheed ee Masar ee biyaha wabiga Nile iyadoo loo marayo heshiis dhameystiran oo sharci ah oo ay wada galaan sedexda dal ee Masar, Suudaan iyo Itoobiya oo ku saabsan sharciyada buuxinta iyo howlgalka biyo xireen
Macron, dhankiisa, wuxuu muujiyey hamigiisa inuu gaaro xal u adeegaya danaha dhinacyada oo dhan sida ugu dhakhsaha badan.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale amaanay doorka muhiimka ah ee Masar ay ka qaadatay xalinta dhibaatada Liibiya, taas oo horseeday wadada siyaasadeed ee xalka arinta Liibiya, isagoo carabka ku adkeeyay Faransiiska sida ay u rabto inay sii wado iskaashiga xoogan iyo isuduwidda Masar ee arintaan.
Labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in la xoojiyo dadaallada wadajirka ah ee lagula dagaallamayo argagixisada gobolka Saaxil, iyadoo la tixgelinayo dareenka wadajirka ah ee lagu taageerayo waddamada gobolka ee soo celinta amniga iyo xasilloonida iyo gaaritaanka horumarka la doonayo.
Waxay sidoo kale carabka ku adkeeyeen caqabadaha argagixisada ay ku hayaan amaanka gobolka guud ahaan.
Labada hoggaamiyeba waxay muujiyeen sida ay u jecel yihiin inay sare u qaadaan iskaashiga labada dhinac ee dhinacyada kala duwan, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, maalgashiga, horumarka, amniga iyo heerarka milatari. Enditem
Previous articleBooliska Oromiya ayaa markii 2aad dib uxirey xubnihii OLF kadib markii maxkamada sare ee Oromiya sii deysay
Next articleWeerar Ka Dhacay Waqooyiga Dalka Mozambique Oo Dad Lagu Laayay